Ipayipi lamanzi elimangalisayo elisogwini lweValencia | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - I-Newsstand
La isiphepho esishiye idolobha laseValencia ngamalitha ayi-152 amahle ngemitha eyisikwele emigwaqweni yaso, weza ngokumangala: kwakhiwa umfudlana obabazekayo wamanzi ogwini lwaseValencian, ikakhulukazi ezifundeni zaseSueca, e-El Perelló naseCullera.
Ngokwe-State Meteorological Agency (AEMET), yi »ebukhali futhi ebabazekayo ebanjiwe ogwini»Komphakathi waseValencian. Kuyamangalisa ngempela.
1 Ayini amapayipi amanzi?
2 Umkhono wamanzi eValencia
Ayini amapayipi amanzi?
Imikhono yamanzi, eyaziwa nangokuthi ama-waterpouts, ayilutho nje izivunguvungu zakhiwa olwandle. Imvamisa zixhuma efwini le-cumuliform, elibonakala kaningi lapho umoya ungazinzile. Abavamisile ukuthinta umhlaba, kepha Kufanele uqaphele kakhulu, ngoba zakhiwa ngaphakathi kwesiphepho esinamandla kakhulu sikagesi futhi zikhiqiza imimoya efinyelela ku-512km / h.
Lezi ziphepho zivame kakhulu eMedithera, yize kungewona wonke umuntu onethuba lokuzibona lapho zingathanda. Kepha siyabonga ukuthi sizohlala sinezithombe namavidiyo wabanenhlanhla. Futhi iqiniso yilokho leyo eyakhiwe izolo ngasogwini lwaseValencian iyamangalisa.
Umkhono wamanzi eValencia
Njengoba ukwazi ukubona kuvidiyo, i-protagonist yethu ibukeka icijile. Njengoba kukhonjisiwe yi-AEMET, kungenzeka ukuthi isiphepho esifike eValencia besivele sine-twist ethile yomoya, ukuze izinto ezivuselelwe zikhulise, ngaleyo ndlela kubangele esinye sezibuko zemvelo ezinhle kakhulu izolo.
Ngaphezu kwalokho, baveze ukuthi amabhawodi amaningi ombani ayaqoshwa olwandle, ikakhulukazi phakathi kukaMareny de Barraquetes no-El Perellonet, ngakho-ke ukubukeka kwe-thrombi eningi akunqatshiwe, njengoba ugu lolwandle lwezifundazwe zaseValencia naseCastellón lunezimo ezikahle zalezi zenzakalo ezimangalisayo zezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ipayipi lamanzi elimangalisayo elisogwini lweValencia